15 ၏ထိပ်တန်း ICOs 2021 - Analytical စာရင်း - ICO Listing အွန်လိုင်း
Crypto Exchange Listing ဝန်ဆောင်မှုများ
Ethereum အခြေခံ ICO များ
Binance Smart Chain အခြေခံ ICO များ
15 ၏ထိပ်တန်း ICOs 2021 - သရုပ်ခွဲစာရင်း
ဇြန္လ 17, 2020
ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chain, Cryptocurrency, နည်းပညာ
စွမ်းအားဖြင့် ရာထူးသင်္ချာ SEO ဆိုသည်မှာ
၁။ SERENITYSOURCE (SERENITYSOURCE) သုံးသပ်ချက်
ဘာကြောင့် Serenity ဖြစ်ရတာလဲ။
၂။ PAWTOCOL (PAWTOCOL) သုံးသပ်ချက်
3. LEDDER (LEDDER) သုံးသပ်ချက်
အဖွဲ့ ၀ င်များ -
၄။ IDEAFEX (IDEAFEX) သုံးသပ်ချက်
၅။ UCBI BANKING (UCBI BANKING) သုံးသပ်ချက်
၆။ DIPCHAIN ​​(DIPCHAIN) သုံးသပ်ချက်
7. TIXL (TIXL) သုံးသပ်ချက်
၈။ PBET (PBET) သုံးသပ်ချက်
၁၀။ ARENA MATCH (ARENA MATCH) သုံးသပ်ချက်
၁၁။ PREPAYWAY (PREPAYWAY) သုံးသပ်ချက်
၁၂။ CINEMADROM (CINEMADROM) သုံးသပ်ချက်
13. STELLERO (STELLERO) သုံးသပ်ချက်
၁၄။ TECRACOIN (TECRACOIN) သုံးသပ်ချက်
15. SATT (SATT) သုံးသပ်ချက်
ဇူလိုင်လစတင်: 13, 2019
ဇွန်လကုန်: 30, 2020
ပျော့ထုပ်: $5000 000
Hard ဦး ထုပ်: $ 20 000 000
အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ၁ ခု
ရောင်းရန် Tokens: 200000000
လက်ခံ: ETH, BTC, USD
စွမ်းအင်ကဏ္ sector သည်ဗဟိုဖွဲ့စည်းပုံမှ“ အကြီးစား” စွမ်းအင်ပံ့ပိုးသူများ (ရေအားလျှပ်စစ်၊ ကျောက်မီးသွေး၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်နျူကလီးယား) တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဖွဲ့စည်းပုံမှနေနှင့်လေကဲ့သို့သောဖြန့်ဝေထားသောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ (DER) ၏ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်းအခြေအနေသို့အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ။
ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၏သိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားသည်၊ အကြောင်းမှာယနေ့စွမ်းအင်ကဏ္ renew သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဆီသို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်ဇယားကွက်သည်ဟန်ချက်ညီစွာညီမျှရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာလျှပ်စစ်ဇယားကွက်ပေါ်ရှိဝန်သည်မည်သည့်အချိန်၌မဆိုမျိုးဆက်နှင့်လိုက်ဖက်ရမည်။ မဟုတ်ပါက high-voltage သို့မဟုတ် low-voltage ပျက်စီးစေသောအခြေအနေများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
Serenity သည်စွမ်းအင်ကဏ္ block တွင် blockchain ကိုယူဆောင်လာသည်။ အသုံးပြုသူများ၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ရိုးရာစနစ်များမှလျစ်လျူရှုထားသူများအတွက်အဖြေများပေးခြင်းအားဖြင့်လူများသည်ဤအသုံးအဆောင်များနှင့်မည်သို့ဆက်ဆံသည်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်။
Serenity ပလက်ဖောင်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုနှင့်စားသုံးသူလိုအပ်ချက်တို့အကြားလိုအပ်သောမျှတမှုကိုပေးစွမ်းပြီးလိုအပ်သည့်အချိန်တွင်ဓာတ်အားခွဲရုံအဆင့်၌တုံ့ပြန်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဆီသို့ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် National Electric Operators များနှင့်ချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။
အိမ်ထောင်စုတိုင်းသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းစွမ်းရည်များပါ ၀ င်သည်။ ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အသေးစားစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ မက်လုံးများနှင့်ဆုလာဘ်များမှတစ်ဆင့်၎င်းတို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အပြုအမူကိုငွေကြေးထောက်ပံ့သည့်စီးပွားရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Serenity ရင်းမြစ် Pty Ltd သည်စွမ်းအင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆံပုံကိုပြန်လည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရန်ရည်ရွယ်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ on ကိုအဓိကအားဖြင့်ကုမ္ပဏီသည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ ကာဗွန်ခရက်ဒစ်များရောင်း ၀ ယ်ခြင်း၊ HEPEK စမတ်ကိရိယာများကိုရောင်းခြင်းနှင့်ငှားရမ်းခြင်း၊ လူနေအိမ်ရာရောင်းအား၊ ငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေ။
စီးပွားရေးပုံစံသည် Serenity ၏အမြင်နှင့်ဖြန့်ဝေထားသောအသိုင်းအဝိုင်း၏အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအင်လက်လီရောင်းချသူများ၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်ဂျင်နရေတာနှင့်ရေရှည်တည်တံ့သောလူနေအိမ်တည်ဆောက်သူဖြစ်လာရန်ရည်ရွယ်သည်။ လူနေအိမ် Net-Zero အိမ်များနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများ (နေရောင်ခြည်၊ ဘက်ထရီ၊ လေစိုက်ခင်းများ) ကိုပို့ဆောင်ပေးသည်။
စွမ်းအင်လက်လီ ၀ န်ဆောင်မှုများ
လူနေအိမ်ရာရောင်းအားနှင့်ငှားရမ်းခ ၀ င်ငွေ
Capital ကျောထောက်နောက်ခံ ERGON တိုကင်အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှု
နိုင်ငံတကာ Affiliates လိုင်စင်
အသားတင်အမြတ်ငွေ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို Serenity အသိုင်းအဝိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်စွမ်းအင်ထိရောက်သောအဆောက်အအုံများနှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စီမံကိန်းများအတွက်ရန်ပုံငွေစုဆောင်းခြင်းသို့ခွဲဝေချထားပေးသည်။
Pre-Ico စတင်ရက်စွဲ: ဇူလိုင်လ 13, 2019
Pre-Ico အဆုံးရက်: သြဂုတ်လ 31, 2019
စက်မှု - စွမ်းအင်
Adi Saric ပူးတွဲတည်ထောင်သူ & CTO
ပက်ထရစ်ရောဘတ်။ Blockchain ဗိသုကာ
Rajesh Kumar က Maruvada ။ ကုန်ပစ္စည်းနည်းဗျူဟာ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုလမ်းပြမြေပုံ
Schazil Najam ။ အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ၊
Ahmad Ashfaq။ Blockchain ပေါင်းစည်း
Ahmad Saeed။ အကြီးတန်း developer
မိုဟာမက် Irfan ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာ
Abu Nurullah ဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ရပ်ရွာမန်နေဂျာ
Shehzad Khan က။ DigitalTelegraph အေဂျင်စီ - စီအီးအို
Deepanshu Bhatt။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနှင့်ဆက်ဆံရေး
Start: ဒီဇင်ဘာလ 27, 2019
အဆုံး: ဇွန်လ 2, 2020
Hard ဦး ထုပ်: $ 27 000 000
အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ၂၀၀ UPI
ရောင်းရန် Tokens: 575000000
လက်ခံ: BTC, ETH, USDT
Pawtocol ၏ကျောရိုးဖြစ်သောအမေရိကန် blockchain ဝါသနာရှင်များနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ချစ်သူများအဖွဲ့သည် Ethereum blockchain ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင်ဘက်စုံသုံးပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်နှင့် ERI-20 လိုက်နာသည့် utility token ကို UPI ဟုခေါ်ဝေါ်သောရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ universal အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဝင်ငွေခွန်။
စက်မှုလုပ်ငန်း: Big Data
Karim Quazzani ။ စီအီးအို
Jason Hetherington ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ
Brandon Stewart ။ အပြင်ထွက်စျေးကွက်
မော်နီကာ Lain-Shaw ။ တိရိစ္ဆာန်အဝေးရောက်ညှိနှိုင်းရေးမှူး
Zach Berger ။ ဘဏ္Strategာရေးမဟာဗျူဟာ
Robert Hitchens CTO
စတင်ခြင်း - သြဂုတ် ၁၊ ၂၀၁၉
ဒီဇင်ဘာလကုန်: 31, 2020
ပျော့ထုပ်: $ 200 000
Hard ဦး ထုပ်: $ 606 000
အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀
ရောင်းရန် Tokens: 30000000
လက်ခံ: ETH, USD
Ledder သည်နည်းပညာဆိုင်ရာပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုတင်ပြသည်။ အပြင်တွင်ကြော်ငြာခြင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှုန်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာများ၊ အမေဇုံကြော်ငြာစသည့်အရေးကြီးကြော်ငြာကြော်ငြာကွန်ယက်များအားလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များကိုသိသိသာသာပိုမိုထိရောက်စေရန်ဟောင်ကောင်မှနည်းပညာကုမ္ပဏီကတီထွင်ခဲ့သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်
Pre-Ico စတင်ရက်စွဲ: 13ပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၉
Pre-Ico အဆုံးရက်: ဇူလိုင်လ 31, 2019
နိုင်ငံများ - ဟောင်ကောင်
Alexey မုန်တိုင်း စီအီးအို
Sergey Kulakov ။ PCB အင်ဂျင်နီယာ
Evgeny Pukhtiy FPGA အင်ဂျင်နီယာ
Anastasia Miaots ။ ပုံစံရေးဆှဲသူ
Stanislav Mescheryakov ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ
အလက်ဇန်းဒါး Abeldinov ။ CTO
ပိုလီနာ Mishcheryakova ။ PR မန်နေဂျာ
Pavel Dudarenko Copywriter
Hamza Khan က အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်
Lalit Bansal ။ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်
Start ကို: ဇွန်လ 18, 2019
အဆုံး: ဇွန်လ 17, 2020
Hard ဦး ထုပ်: $ 58 000 000
အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: 0.00 IFX
ရောင်းရန် Tokens: 400000000
လက်ခံ: BTC, ETH, XRP, BCH, EOS, LTC, XLM, EUR
IdeaFeX သည်ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အတူဘဏ္operationsာရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုသုံးကဏ္ investment ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလက်ဖောင်းကိုဖန်တီးသည်။ ၎င်းအစိတ်အပိုင်းများတွင် Ethereum blockchain၊ လေလံတင်ခြင်းနှင့် cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်းတို့ကို အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်သည့်စျေးကွက်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ငါးခုရှိသည့် IdeaFeX တိုကင် (IFX) မှဤအစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်သွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ စီမံကိန်းသည် ၂၀၂၈ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၃၀ ဘီလီယံရရှိနိုင်သည့်အဓိကဈေးကွက်ကိုတည်ထောင်ရန်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသောရည်မှန်းချက်ချမှတ်ခဲ့သည်။
စက်မှု - ဘဏ္Financeာရေး
နိုင်ငံများ - ပြင်သစ်
Jiulin Teng အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
Xilong Wu Backend & ဒေတာဘေ့စ
Vlad Burilov ။ လိုက်နာမှုနှင့်ဥပဒေရေးရာ
Changyi Chen DevOps & Cloud အခြေခံအဆောက်အအုံ
Shuishan ဝမ်။ Full-Stack Developer ဖြစ်သည်
Siyuan လီ။ Full-Stack Developer ဖြစ်သည်
David Bede စျေးကွက်ရှာဖွေရေး & BizDev
Anastasiia Pereverzeva ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်လူမှုမီဒီယာ
Siva Gowtham ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်လူမှုမီဒီယာ
Start ကို: အောက်တိုဘာလ 18, 2019
အဆုံး: မေလ 31, 2020
Hard ဦး ထုပ်: $ 12 000 000
အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု: 300 UCBI
ရောင်းရန် Tokens: 3000000
လက်ခံခြင်း - ETH, XRP, BTC, LTC, MAD, EUR, USD
UCBI သည်လန်ဒန်အခြေစိုက် blockchain စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသည့်ဒေတာဘဏ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပြီး၎င်းတွင် crypto space နှင့်စစ်မှန်သောစီးပွားရေးအကြားကွာဟမှုကိုပေါင်းကူးပေးပြီးသုံးစွဲသူများအားတီထွင်ဆန်းသစ်သောဘဏ်လုပ်ငန်းနည်းပညာကိုလက်လှမ်းမီစေသည်။ စီမံကိန်းခေါင်းစဉ်သည် Cryptocurrencies နှင့် Blockchain International Union ကိုဆိုလိုသည်။ UCBI သည်၎င်းတို့၏ blockchain-enabled ဂေဟစနစ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အမည်တူ၏အမှတ်အသားကိုကြိုတင်ရောင်းချခြင်းကိုပြုလုပ်နေသည်။
Pre-Ico စတင်ရက်စွဲ: ဇူလိုင်လ 17, 2019
Pre-Ico အဆုံးရက်: အောက်တိုဘာ 17, 2019
နိုင်ငံများ - မော်ရိုကို
Hamza Khan က အကြံပေးသူ
Muhammad Owais အကြံပေးသူ
Shehzad Khan က
Muhammad Kashif Fazal Wadood UCBI Maroc, LTD ၏အကြံပေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေး
Artur Holzwert စျေးကွက်ရှာဖွေရေး
စတင်: ဇူလိုင်လ 19, 2019
ပျော့ထုပ်: $6000
Hard ဦး ထုပ်: $ 34 000
အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ၁ ETH
ရောင်းရန် Tokens: 350000000
လက်ရှိတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းများတိုးများလာခြင်းသည် blockchain နည်းပညာကိုအမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နည်းလမ်းများရှာဖွေနေကြသည်။ အနုပညာသည်အလွန်အမင်းဖန်တီးမှုသဘောသဘာဝမည်သို့ပင်ဖြစ်စေအနုပညာသည်၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနယ်ပယ်များစွာတွင်ဆန်းသစ်သောချဉ်းကပ်မှုလိုအပ်သောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာ - ငယ်ရွယ်သောစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအတွက်နည်းလမ်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အနုပညာနှင့်, သင်တန်း, လုံခြုံခြင်းနှင့်ချွတ်ယွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်၏ဖွဲ့စည်းခြင်း။
Pre-Ico စတင်ရက်စွဲ: မေလ 18, 2019
Pre-Ico အဆုံးရက်: Aprilပြီလ 18, 2019
စက်မှုလုပ်ငန်း - အနုပညာ
နိုင်ငံများ - စင်ကာပူ။
ဝမ်ဖန်းfei DIPChain တည်ထောင်သူ
ဂျက်ကီဟွာ DIPChain ပူးတွဲတည်ထောင်သူ
Liang Hai ။ DIPChain ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်ဗိသုကာ
ဂျော်နီဝမ်။ DIPChain COO
Feng Xiaoyu ။ DIPChain စားအုန်းဆီကြမ်း
Fimo Xu။ DIPChain CMO
Gao Liang DIPChain CBO
Vicente Quian ။ DIPChain ပြည်ပ COO
ဆိုနီယာလျူ။ DIPChain အမှတ်တံဆိပ်ဒါရိုက်တာ
ဝမ် Shuai ။ DIPChain ရပ်ရွာလည်ပတ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူး
Li Pengxiu DIPChain မီဒီယာဒါရိုက်တာ
Xie Meng ။ DIPChain နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာ
Derek Zhang ။ DIPChain ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်ဒီဇိုင်း
စတင်: ဇူလိုင်လ 17, 2019
အဆုံး: ဇွန်လ 30, 2020
ရောင်းရန် Tokens: 45000
လက်ခံ: BTC, ETH, XRP, XLM, EUR
Tixl သည် Bitcoin နှင့်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းများကိုနောင်မျိုးဆက်ငွေပေးချေမှုအနိမ့်ဖြင့်လျင်မြန်စွာနှင့်ပုဂ္ဂလိကသို့လွှဲပြောင်းခွင့်ပြုသည့်နောက်မျိုးဆက်ငွေပေးချေမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ TXL သည် Tixl ကွန်ယက်၏ဇာတိလက္ခဏာသက်သေဖြစ်သည်။ ငွေသွင်းခြင်းအခကြေးငွေနှင့်အခြားကွန်ရက်အခကြေးငွေများကို TXL တွင် (သွယ်ဝိုက်) ပေးဆောင်သည်။ TXL ကိုယ်တိုင်ငွေလွှဲခသုညဖြင့်ပေးပို့နိုင်သည်။ ထိုနည်းတူစွာ TXL သည်ယနေ့ငွေသား၏ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးအခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်မတူပါ။ Tixl ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်တွင် Tixl Token ကို MTXLT အဖြစ် Binance Chain တွင်လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် cryptocurrencies အထူးသဖြင့် Bitcoin ကိုထိရောက်စွာလွှဲပြောင်း။ မရပါ။ အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်နှေးကွေး၊ စျေးကြီးပြီး၊ Bitcoin Lightning Network ကဲ့သို့သောအဖြေများသည်သူတို့၏အယူအဆနှင့်နည်းပညာဒီဇိုင်းအားနည်းချက်များကြောင့်ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
Tixl သည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောငွေပေးချေမှုကွန်ယက်ကိုတည်ဆောက်ရန်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း blockchain ကမ္ဘာမှပေါ်ထွက်လာသောခေတ်မီဆန်းပြားသည့်နည်းပညာများကိုအသုံးပြုထားသည်။ တစ်ခုမှာ Bitcoin နှင့်အခြား digital ပစ္စည်းများကို Tixl ကွန်ယက်သို့ပို့နိုင်သည်။ Tixl ကွန်ယက်အတွင်းတွင်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းများကိုလျင်မြန်စွာ၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်နှင့်ငွေပေးချေမှုအနိမ့်ကျဖြင့်လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ Tixl ကွန်ယက်သည်မှတ်ပုံတင်ထားသောပေးပို့သူများကိုသာငွေပေးချေခြင်းနှင့်အခြားလိမ်လည်လှည့်စားခြင်းများကိုတားဆီးရန်၊
Pre-Ico စတင်ရက်စွဲ: 15ပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၉
Pre-Ico အဆုံးရက်: ဇွန် 17, 2019
ပလက်ဖောင်း: သီးခြား blockchain
Christian Eichinger ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
Sebastian Gronewold ။ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
သူ Mike Lohmann နည်းပညာအတိုင်ပင်ခံ
Bernd Strehl ။ ဆော့ဖ်ဝဲအင်ဂျင်နီယာ
Vihren Stoev ။ စာရေးသူ
Lennart Brandt။ UX နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနာ
ခရစ္စတိုဖာ Obereder ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိချုပ်
Leon Szeli Evဝံဂေလိတရားဟောဆရာ
ပျော့ထုပ်: $2000 000
Hard ဦး ထုပ်: $ 17 500 000
ရောင်းရန် Tokens: 108000000
လက်ခံ: BTC, ETH, LTC
Pbet သည်လောင်းကစားလုပ်ငန်းအတွက်အပြည့်အဝပြည့်စုံသော blockchain ဖြေရှင်းချက်ကိုကမ်းလှမ်းထားသောအုတ်နှင့်မော်တာများကိုစီမံကိန်း၏စီးပွားဖြစ်အွန်လိုင်းထုတ်ကုန်များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ Pbet ၏ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးလက္ခဏာမှာဤကုမ္ပဏီသည်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောထုတ်ကုန်များနှင့်နိုင်ငံ ၄ ခုနှင့်မြေယာအခြေပြုလောင်းကစားရုံများအထိကျယ်ပြန့်သောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာစီးပွားရေးကွန်ယက်ဖြင့် crypto ဘုံသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
Pre-Ico စတင်ရက်စွဲ: 22ပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၉
Pre-Ico အဆုံးရက်: ဇွန် 14, 2019
နိုင်ငံများ - ဆိုက်ပရပ်စ်
ဖရက်ဒရစ် Vachon။ သမ္မတနှင့်တည်ထောင်သူ
Bassel Moukaddem။ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
Marcel Huard ချုပ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအရာရှိ
ပက်ထရစ်Aubé။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိချုပ်နှင့် CTO Blockchain
Manuel Presa ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်နည်းပညာအရာရှိချုပ်
Marina Anisina ။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ်
Raul Duque ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္Financeာရေးဌာနမှူး
Rita Jimenez ။ စာရင်းကိုင်
ပါပလောရိုဒရစ်။ Interactive ဗိသုကာ
Gonzalo Mas ။ အကြီးတန်း developer - Front-end
Aly Santos ။ အရောင်း - ကာရစ်ဘီယန်
Raul Solis ။ အရောင်း - ပီရူးareaရိယာ
Miguel Cortez အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် - ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု
Start ကို: ဇွန်လ 3, 2019
အဆုံး: စက်တင်ဘာလ 30, 2020
ပျော့ထုပ်: $3000 000
Hard ဦး ထုပ်: $ 30 000 000
ရောင်းရန် Tokens: 189000000
လက်ခံ: ETH, BTC, Fiat
ထွန်းသစ်စ blockchain နည်းပညာသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါးကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ထိုးဖောက်နေသည်။ ပြinnovativeနာအမျိုးမျိုးအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်တိုးတက်မှုရှိသောဖြေရှင်းနည်းများဖြင့်ဤနည်းပညာသည် cryptocurrencies အပေါ်သံသယရှိသူများပင်စိတ်ဝင်စားသည်။
Pre-Ico စတင်ရက်စွဲ: ၂၀၁၁ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်
Pre-Ico အဆုံးရက်: ဇွန် 30, 2019
အန်တိုနီယိုမီလီယို။ CEO ဖြစ်သူ Marketing Director နှင့် Co-Founder ဖြစ်သည်
Daniele Bianchini ဥက္ကChairman္ဌ & Co- တည်ထောင်သူ
အီဗန်လူးထရာ။ ထိပ်တန်းအကြံပေး & Tech မှဆရာ
Fabrizio Meli ။ အထွေထွေမန်နေဂျာ
Francesco Macri ။ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး
Alessandro Traversari ။ နည်းပညာဆိုင်ရာကိရိယာညွှန်ကြားရေးမှူး
Sebastian Lucero CTO
Raul Lloveras ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာ
Ernesto Kruger ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဆက်ဆံရေး
Juan Pablo Moreno အဖွဲ့ဒါရိုက်တာ
Freddy Ramirez ။ Blockchain ကွန်ယက်ဒါရိုက်တာ
Cristian Castro ။ Crypto အင်ဂျင်နီယာဒါရိုက်တာ
Vera Zhang က။ တရုတ်ရုံးညွှန်ကြားရေးမှူး
Maurizio Sorini ။ VAS အရောင်းဒါရိုက်တာ
Kiko Serrano ။ အကြီးတန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ
David Gonzalez ကွန်ရက်အရောင်းညွှန်ကြားရေးမှူး
Domenico Cantone ။ Web Marketing ဒါရိုက်တာ
Damian Tirante Web Designer
Lorenzo Bove။ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးညွှန်ကြားရေးမှူး
Marisa Ruiz ။ ဘဏ္Directorာရေးဒါရိုက်တာ
ဗာဂျီးနီးယား Albelda ။ လူမှုမီဒီယာ Wings
Vikas Kalwani ကင်ပိန်း Manager ကို
အဆုံး: သြဂုတ်လ 21, 2020
ရောင်းရန် Tokens: 50000000
ဘဏ္realာရေးအပြီးတွင် blockchain နည်းပညာသည်ဂိမ်းကစားခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ခိုင်မာစွာခြေကုပ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းသည် blockchain ပေါင်းစည်းမှု၏ရှေ့တန်းမှ ဦး ဆောင်နေသည်။ Tron နှင့် EOS ကဲ့သို့သော blockchain ဖြေရှင်းမှုများသည်၎င်း၏လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Pre-Ico စတင်ရက်စွဲ - ဇွန် ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၀
Matthew Skinner ။ တည်ထောင်သူ
Josh Lamont တည်ထောင်သူ
Briley Hooper တည်ထောင်သူ
ဂျင်း Speville ။ နည်းပညာအကြံပေး
Start ကို: ဇွန်လ 1, 2019
အဆုံး: သြဂုတ်လ 31, 2020
Hard ဦး ထုပ်: $ 50 000 000
ရောင်းရန် Tokens: 6500000000
PrepayWay အားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးအတွက်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့်ငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သော blockchain ဂေဟစနစ်အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ၄ င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးအမျိုးမျိုးကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လက်ဖြင့်စာရွက်ပေါ်တွင်အခြေခံသောလုပ်ငန်းစဉ်သွင်ပြင်လက္ခဏာများအားယုံကြည်စိတ်ချရမှုမရှိခြင်း၊ ရလဒ်အနေဖြင့်မျှဝေထားသောသတင်းအချက်အလက်သည်လုံခြုံမှု မရှိ၍ အပြည့်အဝယုံကြည်ရန်ခက်ခဲသည်။
နိုင်ငံများ - ဆွစ်ဇာလန်
ပါမောက္ခ Dr. Frank Emmert ။ co-founder
ဒေါက်တာ Mihnea Constantinescu CPO & Co- တည်ထောင်သူ
နီကိုလိုင် Kalinin ။ စီအီးအို & ဆို - တည်ထောင်သူ
Eduard Lanebraun။ CFO & Co- တည်ထောင်သူ
အိုလီဗာ Nedela COO & Co- တည်ထောင်သူ
ဒေါက်တာ Vahe Sahakyan ပူးတွဲတည်ထောင်သူ - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ
အန်တိုနီယို Gurei ။ ရပ်ရွာမန်နေဂျာ & Co- တည်ထောင်သူ
စတင်ခြင်း - ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်
အဆုံး: နိုဝင်ဘာလ 30, 2020
ပျော့ထုပ်: $ 1 000 000
Hard ဦး ထုပ်: $ 150 000 000
ရောင်းရန် Tokens: 300000000
လက်ခံ: ETH, BTC, TRX, BNB, USDT, FIAT
Pre-Ico စတင်ရက်စွဲ: မေလ 30, 2019
Pre-Ico အဆုံးရက်: ဒီဇင်ဘာလ 31, 2019
လုပ်ငန်းနယ်ပယ် - မီဒီယာ
နိုင်ငံများ - ကေမန်ကျွန်းစု
Igor Egorov ။ တည်ထောင်သူ, Produser, ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ
Pavel Gubanov со - တည်ထောင်သူ, အင်တာနက်စျေးကွက်
Katya Ulyanova စာချုပ် Editor, Produser
အယ်လီနာ Egorova ဒီဇိုင်နာ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ
အလက်ဇန်းဒါး Sivak ။ Produser, ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ
Sveta Valucheva ။ အယ်ဒီတာ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ
Charmaine Maravilla ။ ရပ်ရွာ Manager ကို
Yury Dziatlau ။ Bounty မန်နေဂျာ
Start ကို: ဇွန်လ 16, 2019
ပျော့ထုပ်: $ 500 000
Hard ဦး ထုပ်: $5000 000
အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ၅၀၀ ယူရို
ရောင်းရန် Tokens: 5880000
Stellero သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်လုပ်ငန်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သောအစ္စရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာသမားရိုးကျအရင်းအနှီးစျေးကွက်နှင့် Crypto-based ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးတို့အကြားကွာဟမှုကိုပေါင်းစပ်ရန်ဖြစ်သည်။
Pre-Ico အဆုံးရက်: ဇွန် 15, 2019
စက်မှုကဏ္ Investment: ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
Aviad Gindi ။ စီအီးအို & Co- တည်ထောင်သူ
Dror တံဆိပ်။ ဘုတ်အဖွဲ့ & Co- တည်ထောင်သူ၏ဥက္က.္ဌ
Elad Kofman။ CSO & Co- တည်ထောင်သူ
နောမ်ဗာနာ။ CTO & Co- တည်ထောင်သူ
Oded v ။ Kloeten။ VP စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပါတနာ
Liron နှင်းဆီ။ ဦး ဆောင်အကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့ & Co- တည်ထောင်သူ
ဗောဇ ဘဏ်လုပ်ငန်းဝါရင့် & ဘဏ္Advာရေးအကြံပေး
ဇာက်သည်အမ် Sutton။ မြို့တော်စျေးကွက်များ & မဟာဗျူဟာအကြံပေး
Roy Keidar။ အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Yigal Arnon & Co
Shirly Moster Biz-Dev မှ BDO ဌာနမှူး။ & Fintech အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်
Alejandro Gómez de la Cruz Alcañiz။ ESMA ဥပဒေအကြံပေး
ဘင် Abulafia ။ Marketing & Distribution Affiliates & Community Manager ဦး ခေါင်း။
Ethan Stufflebeam ။ စစ်ဆင်ရေးနှင့်သုတေသန
Yuri Dziatlau ဖြစ်သည်။ Global Campaign & Bounty Manager
Leonard ဂျက်ဆင်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဆက်ဆံရေးမန်နေဂျာ
အင်းယွမ် Xue။ အာရှထိတွေ့ဆက်ဆံမှုခေါင်းဆောင်
ဂျွန်ဆင်ဂျွန်။ APAC ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏ ဦး ခေါင်း
Eitan Tayar ။ စီးပွားရေးပညာရှင်နှင့်အချက်အလက်လေ့လာဆန်းစစ်သူ
Almog Kurower ဝဘ်ဒီဇိုင်း & ဂရပ်ဖစ်
Yael Altstater ။ စီးပွားရေးပညာရှင်နှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Start: ဇန်နဝါရီလ 17, 2019
အဆုံး: ဒီဇင်ဘာလ 30, 2020
ရောင်းရန် Tokens: 21000000
လက်ခံ: BTC, ETH, Fiat
Tecra သည်ပိုလန်စီမံကိန်း၏အမည်ဖြစ်ပြီး graphene ကိုအထူးအလေးပေးသောခေတ်မီနည်းပညာထုတ်ကုန်များကိုစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်အရင်းအနှီးကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည့် blockchain platform ပေါ်တွင်အသေးစိတ်ရေးဆွဲခဲ့သည်။
Graphene နည်းပညာနှင့်ဆက်စပ်သောစျေးကွက်၏ရင့်ကျက်မှုကြောင့်သီအိုရီအရအသုံးချမှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအကောင်အထည်ဖော်မှုတို့အကြားကွာဟမှုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Graphene-based နည်းပညာအများစုသည်သုတေသနအဆင့်တွင်ရှိနေသေးပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြားတရားဝင်စိုးရိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုစံချိန်စံညွှန်းများမရှိခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ထားသော Graphene အရည်အသွေးဖြစ်ပါသည် ဤနည်းပညာသည်ဒုတိယအဆင့်တွင်ရှိနေသည်။
Pre-Ico စတင်ရက်စွဲ - အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၁၈
Pre-Ico အဆုံးနေ့စွဲ: ဇန်နဝါရီလ 16, 2019
စက်မှုလုပ်ငန်း - သတ္တုတွင်း
ရောဘတ် Anacki ။ co-founder
Łukasz Gromek co-founder
Przemyslaw Karda ။ co-founder
Krzysztof Podolski ။ co-founder
Wiesław Strek ။ သိပ္ပံပညာရှင်
Andrzej Jezowski သိပ္ပံပညာရှင်
Dariusz Hreniak ။ သိပ္ပံပညာရှင်
အန်နာ Wedzynska ။ သိပ္ပံပညာရှင်
Krzysztof Kielec ။ စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူ
Andrzej Kail ။ စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူ
Robert Brandt ။ ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူ
Filip Nasiadko ။ အိုင်တီစီမံကိန်းမန်နေဂျာ
Maciej Partyka ။ Blockchain ရေးသားသူ
ဒံယလေက Borowski ။ Blockchain ရေးသားသူ
Radosław Struniawski ။ အကြီးတန်း Programmer
Michał Tomaka ။ အနုပညာဒါရိုက်တာ
Krzysztof Łosiak။ Frontend ပြုစုသူ
Krystian Kowalczyk ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြံပေး
Marcin Godlewski ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူ
Piotr Marcinik ။ မီဒီယာကျွမ်းကျင်သူ
Kaja Kretschmer ။ ရပ်ရွာကျွမ်းကျင်သူ
Anna Karda ။ ရပ်ရွာကျွမ်းကျင်သူ
Justin O'Donnell Blockchain ကျွမ်းကျင်သူ
Start: ဇန်နဝါရီလ 1, 2018
အဆုံး: ဒီဇင်ဘာလ 31, 2020
ပျော့ထုပ်: $3360 000
Hard ဦး ထုပ်: $ 28 560 000
အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ၁ SaTT
ရောင်းရန် Tokens: 68000000000
Smart Contract ကိုအခြေခံသော ICO SaTT ကိုအမေရိကန်၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးကြော်ငြာရှင်များနှင့်အကြောင်းအရာအယ်ဒီတာများ၏ဂေဟစနစ်တွင်ဆက်ဆံရေးကိုပြောင်းလဲရန်ရည်ရွယ်သည်။ စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကြော်ငြာသူများသည်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုသူတို့ရွေးချယ်သည့်ရလဒ်အခြေအနေများဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်သြဇာသက်ရောက်သူသည်တောင်းဆိုမှုကို တုံ့ပြန်၍ စာချုပ်အားအတည်ပြုရန်မျှော်လင့်ရသည်။ SaTT Smart-Contract သည်တတိယပါတီ APIs များနှင့် ဆက်သွယ်၍ လှုပ်ရှားမှု၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ငွေပေးငွေယူ၏တန်ဖိုးကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
Pre-Ico စတင်ရက်စွဲ - ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၂၀
လုပ်ငန်းနယ်ပယ် - ကြော်ငြာခြင်း
Gauthier Bros အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်
Samir KSIBI တွဲဘက်ပါတနာ
ဂျက်ဖရီ MOYA Blockchain ကျွမ်းကျင်သူ
Caroline Pourcer အကြီးအကဲဒီဇိုင်း / UX Guru
Mohamed BOUHAOUALA ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု
Thamer BEN DHAFER ကွန်ပြူတာအင်ဂျင်နီယာ
မိုဟာမက် MEZLINI Backend အင်ဂျင်နီယာ
Wiem BOUTITI ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာများ
Nicolas Roy လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး
Rayhane GUESSMI အုပ်ချုပ်ရေးလက်ထောက်
မိုက်တယ်! စာရင်းသွင်းမှုကို အတည်ပြုရန် သင့်ဝင်စာများကို စစ်ဆေးပါ။
ဤ site ၏ admin သည်အလုပ်လုပ်နေသောကြောင့်, လျှင်မြန်စွာလူသိများလိမ့်မည်, ကမေးစရာမရှိပါ,
၎င်း၏အင်္ဂါရပ် contents တွေကိုကြောင့်။
skrillex ruffneck ဘေ့စ် 10 နာရီ
မင်္ဂလာပါ ၊ Google ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
နှိုင်းယှဉ်နိုင်သောအကြောင်းအရာကိုရှာဖွေနေချိန်၊ သင့်ဝဘ်ဆိုက်သည် ဤနေရာသို့တက်လာပြီး ကောင်းမွန်နေပုံရသည်။
ကျွန်ုပ်ဂူဂဲလ် Bookmarks တွင်မှတ်ထားပြီးပါပြီ
မင်္ဂလာပါ၊ Google ကတစ်ဆင့် မင်းရဲ့ ဝဘ်ဘလော့ဂ်ကို သတိပေးပြီး ရှာတွေ့ခဲ့တယ်။
အဲဒါက တကယ်ကို သတင်းအချက်အလက်ပါ။ ဘရူဆဲလ်ကို သတိထားလိုက်ပါ့မယ်။
နောင်တွင် ဤအရာကို သင်လုပ်ဆောင်သောအခါ ကျေးဇူးတင်ပါမည်။
မင်းရေးတဲ့စာကြောင့် တခြားလူ မြောက်မြားစွာ အကျိုးရှိလိမ့်မယ်။
အထွေထွေ ပံ့ပိုးကူညီမှု အီးမေးလ်-
Telegram Chat ပံ့ပိုးမှု-
ICO Listing Online သည်လွတ်လပ်သော ICO အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်စာရင်းပြုစုသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်သုံးစွဲသူများတိုးပွားလာသော blockchain အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏ ICO စာရင်းပြုစုလိုပါကသို့မဟုတ် ICO မြှင့်တင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါကတိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်းသို့မဟုတ်ကြေးနန်းဆက်သွယ်ခြင်းမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
မူပိုင်ခွင့်© 2022 အွန်လိုင်းစာရင်း ICO။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။